Mba samia miatrika amin’izay… | NewsMada
Mba samia miatrika amin’izay…
Par Taratra sur 05/07/2018
Efa ireny ny datim-pifidianana! Efa nilaza ihany koa ny minisitra tompon’andraikitra fa misy sady ampy ny tetibola hiatrehana izany. Tsy atoro intsony angamba fa efa hita maso koa ny fiomanana fatratra hataon’ireo kandidà, efa nampahafantatra ny fahavononany hilatsaka hofidina…
Iza sisa no tsy vonona? Mbola misy fotoana kely, hiatrehana izany. Tsy maintsy hisy ary tsy maintsy hatrehina izy ity. Niria-nahaory rahateo, indrindra ho an’ireo nitady fiovana sy fanovana. Efa tsy tampoka intsony angamba.
Mila mailo koa anefa! Mitsimbadibadika tampoka ny toe-draharaham-pirenena. Maro ny fanina tao anatin’ny fotoana fohy, satria varimbariana ka nihoaram’ny fivoaran’ny toe-draharaha. Iza, na ny foto-kevitr’iza no tena arahina? Miankina amin’ny faharesen-dahatry ny tsirairay amin’izay io.
Ny niaraka omaly, nisaraka anio. Ny mpinamana anio, hifamely rahampitso. Politika daholo izany. Tsy tokony ho fanina ao anatin’izany koa anefa ny mpifidy. Alao ambony, alao ambany ny paikady, ny fandaharanasa, ny vina, sns. Io no fotoana hany maha mpanapaka sy tompom-pahefana ny mpifidy, izay mandrafitra ny vahoaka.
Hipoka olona, be mpanotrona, be mpanaraka, sns. Tsy mbola mamaritra ny maha mamim-bahoaka ny kandidà ireny. Hahitana soritra kosa ny fironana sy ny mety ho endriky ny fifaninanana anefa. Na izany aza, tombana ihany ny azo hatao fa eny am-pelatanan’ny tsirairay izay manan-karatra ny hoavin’ny firenena… sy ireo kandidà.
Samia miomana dieny izao, sao ho nenina mandritra ny taona maro hifandimby indray.